Home News Amiirka Kooxda Al-shabaab oo soo diray Fariin 22-Daqiiqo ah
Amiirka Kooxda Al-shabaab oo soo diray Fariin 22-Daqiiqo ah
Amiirka guud ee Ururka Alshabaab Sheekh Axmed Cumar Abuu Cubeyda oo fariin maqal ah soo diray ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo dagaalka ay kooxdiisu kula jirto dowlada Somalia.
“Waxaa inoo muuqaneysa in dhowr boqol oo daneystayaal ah, sheegtana inay sharci dajiyeyaal yihiin ay masiirka Umadeena u gacan gelinayaan shisheeye, waa koox yar oo Allaah ku heysata talada iyo xukunka iyo xaqqa tashriica ee uu la gaarka yahay, Waa gole calooshood u shaqeystayaal ah oo shuruucda ay dajiyaan dalka u horseeday inuu galo maxmiyad, iyo in dhulkii uu beylah u noqdo cadowga Umadani lahayd. Waa gole dalka u gacan gelinaya cadowgeena soo jireenka ah ee Itoobiya iyo Kenya. Waxay barratan ugu jiraan sidii ay u hirgelin lahaayeen hanka siyaasadeed ee gumeystuhu ka damacsan yahay bulshadeena Muslimka ah. Waa golaha doortay hogaamiye bilaash xeyte ah, kasxumo iyo garaad la’aana ku caanbaxay, Kampala accrod-na ku garaadsaday” ayuu yiri abuu Cubeyda.